Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 14, 2020 03: 33 No Comments
Maalintani sidoo kale waxay sharfay ilaahyadii Roomaanka, Lupercus iyo Faunus, iyo sidoo kale halyeeyadii mataanaha ahaa, oo aasaasi lahaa Rome (Remus iyo Romulus)
Lupercous macnaheedu waa "ugaadhsiga ugaadhsadaha." »
Roomaanku waxay ugu yeedheen iiddii "Lupercales". Caadooyinka isweydaarsiga Maalinta Jacaylka iyo dhammaan dhaqammada kale oo lagu sharfayo Lupercus, kaas oo sidoo kale ku xidhnaa dhaqan dhalinyaro jaahiliin ah, "xasilloon", oo horseeday sino.
Maalinta " Lupercalia »
Maalintaas, " Luperci Ama wadaaddada ah Lupercus oo ku labisan dharka dharka lagu xidho ee lagu xardho Godka yeeygu wuxuu gawrici lahaa ari iyo eey, dabadeed buu isku daboolaa dhiig; wuxuu ku ordayay buuro wareegsan maqaarka riyaha loo yaqaan " februa ". Sidaa awgeed magaceeda, Febraayo.
Haweenku waxay fadhiyeen buurta agteeda, sidii wadaadku ku garaacay maqaar riyo ah si uu uga dhigo mid iyaga dhalaya.
Dumarkii magaalada oo dhan oo soo urursaday ayaa magacyadoodii lagu dhex dhejiyey sanduuqyada. "Qoraallada jacaylka" waxaa loogu yeedhay xusuus qor.
Ragga reer Rome waxay sawiraan qoraal, iyo haweeneyda magaceedu ku qoran yahay qoraalka waxay noqotay rafiiq galmo oo uu la galmoon doono ilaa xigta Lupercalia ama Febraayo 14.
Midabka guduudku waa muqadas ilaa maantadan la joogo dhiigga ariga iyo eeyga iyo qaabka wadnaha uma eka qalbiga aadanaha, laakiin wuxuu matalaa shahaadada aadanaha ama furitaanka hoolka qolyaha xurmada leh .
Maalinta Jacaylka waxay ahayd arrin aan laga fiirsaneyn, laga yaabee inuu yahay shahiid halyeeyo ah, oo dhaqan ahaan ay dileen Romanku 14-kii Febraayo, qiyaastii 269. Maalintan waxaa loo dabaaldegayay Kaniisadda Kaatooligga ee Roman.
Maalinta dhimashadiisu waxay la mid ahayd tii Iiddii Roomaanka ee Lupercales. Dabaaldegii labada ayaa midoobay.
Sidaa awgeed maalinta Jacaylka ee Jacaylka ayaa ah oo keliya sii wadista Lupercales: maanta malaayiin dhalinyaro ah ayaa lumiya bikradnimadooda darteed maanta; pama waxbadan, way fiicantahay in galmo la sameeyo maxaa yeelay waa Maalinta Jacaylka.
Rome weligeed waxay ahayd dhulka kubbadda-doonista iyo hamiga xayawaanka!
Saddex waxyaabood oo aadan aqoonin waxa ku saabsan, Maalinta Jacaylka, Maalinta Jacaylka
Qarsoodiga ka dambeeya galmada: inta u dhaxaysa ninka iyo naagta? Ayaa qaylo badan sameeya inta lagu jiro galmada? Nin ama naag